Izilungiso kunye neengcebiso zeetokisi zeFSX cfg
umbuzo Izilungiso kunye neengcebiso zeetokisi zeFSX cfg
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #973 by DRCW
Ukumemeza amatsha ndibeke ndawonye izilungiso ezinokubangela ukuhamba kweenqwelo ezininzi ngokukhawuleza (i-Graphics wise). Eyokuqala
inxalenye iya kukunika izilungiso eziphambili ezifunekayo kwi-FSX. Ukuba unayo i-FSX I-Steam Edition awudingi ukwenza le ngxenye yokuqala.
(Olu lungiso lujoliswe kwiinkqubo ezineenkcukacha ze-quad okanye i-CPU engcono kwaye ubuncinci be-4 gig RAM okanye bhetele)
Ngamanye amazwi, iinkqubo ezininzi zanamhlanje.
Icandelo elinye: iinguqu eziyaziwayo kunye ezifunekayo
Okokuqala sifuna ukufikelela kwindawo ephambili Ifayile yefayile yeFSX ( Qiniseka ukuba usethe iifestile ukubonisa iifayile ezifihliweyo kunye neefolda )
Khetha Qala / Ikhompyutheni / C: / Abasebenzisi / Igama lakho okanye iikhompyutheni / i-Appdata / I-Roaming / iMicrosoft / FSX
Emva kokuba uvula ifolda yeFSX fumana indawo fsx.cfg fayili kwaye uyivulele i mpopasho. Kufuneka ibonakale njengale:
ISOUND = 1
ISISound = 1
TshintshaTime = 4.000000
InfoBrakesEnable = Inyaniso
InfoParkingBrakesEnable = Inyaniso
InfoPauseEnable = Inyaniso
InfoSlewEnable = Inyaniso
InfoStallEnable = Inyaniso
InfoOverspeedEnable = Inyaniso
WideViewAspect = Iinyaniso
Iintlobo zomsebenzisi = Iindiza, iHelikopta
SimObjectPaths.0 = SimObjects \_ iindiza
SimObjectPaths.3 = SimObjects \_ iinqanawa
SimObjectPaths.4 = SimObjects \_ Izilwanyana
Ukuphakanyiswa = 1
IMAGE_QUALITY = i-1
IINKCUKACHA = 1
I-WeatherGraphDataInDialog = 0
Controls_Default = Umgangatho
Controls_Current = I-Standard
Idilesi = 1,2
I-FrameRate = i-1,1
I-FrameRate = i-2,1
AMANDING_LIGHTS = 1
EFFECTS_QUALITY = i-1
TEXTURE_QUALITY = i-3
IMAGE_QUALITY = i-0
Bona_Self = 1
Page = = 1
UKUSEBENZA = C: \_ Abasebenzisi \_ Darrin \_ Amaphepha \_ I-Flight Simulator X Iifayile \_ 737
KhethaAircraftType = Yonke
I-AirlineDensity = 25
KWENKQUBO = 0
I-AndesAndFerriesDensity = 0
INDLELA = 0
Umtsalane = 0.000000
Jikelele = 0.000000
UnlimitedFuel = Ubuxoki
TrueAirspeed = Iinyaniso
AutoCoord = Iinyaniso
RealMixture = Ubuxoki
StressDamage = Iinyaniso
GEffect = Iinyaniso
ManualLights = Ubuxoki
GyroDrift = Ubuxoki
CrashWithDyn = Ubuxoki
CrashDetection = Inyaniso
AutoTrim = Ubuxoki
VumelaEngineDamage = Buxoki
ISIXEKO = iTwin Falls
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ Cessna172.DLL.naewwuikittlereqluuonlneoouooozyobobcrz = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_06_kuphazamiseka kwi.GAU.bcinqoaarbwutthknnhtqauewekaekubiibzcncu = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_07_ ukuhlaselwa kude.GAU.bcinqoaarbwutthknnhtqauewekaekubiibzcncu = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_10_ umyalezo wesifiso.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_11_ividiyo yokuzonwabisa.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_12_reakeoff.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_18_o ndlela.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_19_kugqibela.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_20_taxi ukuya kwesango.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_21_gate kufika.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ i-brake-squeaking_Sound.GAU.aqrreuwiutqzttebzkrqncewurhnactlnwktwrbi = 2
SHOW_TERRAIN = i-1
bonisa_waypoints = 1
bonisa_impawu = i-1
Siza kuqalisa kwicandelo lokubonisa. Ukuba usebenzisa i-LCD Monitor okanye nayiphi na isikrini esiluhlaza siya kufuna ukutshintsha ezi zilandelayo kwi-[Bonisa] Icandelo.
WideViewAspect = Ubuxoki
Sitshintsha ubuxoki kwiQiniso
Ngezantsi nje [Graphics] candelo longeza oku kulandelayo:
I-HIGHMEMFIX = I-1 ibaluleke kakhulu kuba ivumela i-FSX ukuba isebenze i-XPM ye-4 gig kwi-VAS (i-Intelligent Space Space) Ukuba usebenzisa i-add-on landscape kunye neenqwelo-moya okanye
i-autogen kunye nezinye izilwanyana ezikhuni ukuya kunene. Umgca ongezelelweyo kwifayile yakho yokuqwalasela iya kunceda ukukhusela i-OOM ( kwimpembelelo yeememori ) Ziziphi eziqhelekileyo kwi-FSX. I-Steam
Uhlobo sele luquka olu tshintsho olulungeleyo.
Ndiyakucebisa ukuba ulayishe Umqhubi weNkqubo at www.sysinternals.com . Esi sixhobo sinokukunceda uqaphele kwaye uqonde ukusebenzisa i-VAS ngelixa uhamba
ukuze ubone indlela iFSX elawula ngayo izixhobo zakho zenkqubo. Kuya kubalwa nje nje VS ( isikhala ) Uza kubona kwakhona i-CPU kunye nokusetyenziswa kwe-RAM.
Ukuqonda le nkqubo kuza kukunceda ubeke i-FSX ngeenqwelo ezide ngaphandle kokuba u-OOM othukisayo ukwenzeka emva kwendiza ye-10 yeyure ekuhambeni kwakho kokugqibela.
Sonke sifanele sikulangazelele ukubona ingqungquthela ye-64 ye simulator yendiza kodwa kude kube yilapho i-4 gigs ye-VAS iyona nto ihamba phambili.
Ngaphantsi kwe b] I-GRAPHICS [/ b candelo lilandelayo:
Tshintshela ku-2048 okanye kwi-4096
Ngokungagqibekanga i-FSX isethelwe kwi-1024 njengomgangatho ongaqhelekanga. Awuyikunwabela imifanekiso yeHD kwi-widescreen ukubeka iliso ngale ndlela. Inqwelo enye
Ukukhuphela (ukuhlawula) akuyi kubonisa ukuba kunokwenzeka ngaphandle kokuba unalo mgca usethe kwi-4096. Kwakhona kwakhona i-Steam Edition sele isetyenziswe kwi-4096 ngokungafani. Unga
Kwakhona uzame i-2048 eyi-HD. Kuya kuxhomekeka kwi-fps (ozimele ngeesibini) Qaphela: Ukuba utshintshe izicwangciso zakho (i-Sliders) kwi-FSX uya kufuneka uphinde usethe lo mgca omnye
njengoko iya kubuyela kwi-1024.
Oku ngasentla ngumgaqo jikelele. Ufanele uqalise i-FSX emva kokuba wenze i-3 ngaphezu kweenguqu kwaye uqhube umqhubi omfutshane phezu kwendawo oqhele ukuyihamba. Ndiyazi uya kuphawula
Icandelo le-2: Iimpawu eziqhelekileyo zokulungiswa kweendawo.
Ndiyincoma emva kokutshintshwa kwezinto ezilandelayo uqhuba i-FSX ngokokuba unemiba nge-fps ungavala kuphela inkqubo kwaye ubuyekeze umgca wecala ukuya kwi-default. Enyanisweni
kuxhomekeke kwinkqubo oqhuba ngayo iFSX. Ndine projekthi ye-8 Core nekhadi le-2 ephezulu ecacileyo ebonakalayo e-firewire kunye ne-16 gigs ye-RAM ephezulu yokusebenza.
Oku kulandelayo www.simforums.com/forums/new-twea...25507.html
I-Tweak #1 - IFraction Frame Fraction
Ukunciphisa eli bangela leempazamo, iMicrosoft iye yavuselela indlela i-Flight Simulator X ishedyuli ebeka phambili ngayo imisebenzi yangasese kwi-FSX. Ngoku kukho ixesha elide leCCU
ezinikezele ukulayisha idatha yeendawo eziqhelekileyo, kubandakanywa izixhobo zendawo, ngexabiso lentlawulo ephantsi. Ngokombono wam, olu tshintsho luye lwasombulula le nto
ukugqithisa, nangona umthwalo wezinto ezibonakalayo ungasaya emva kwinqanaba eliphantsi kakhulu (ixabiso elingaphantsi kwe-10 fps) okanye ngokukhawuleza komoya okukhawuleza (ngokukhawuleza kunamaqhina e-600). Nazi
iindlela eziliqela zokulungisa indlela i-CPU ixesha elihlala ngayo le-FS ukulayisha iindawo ezibonakalayo kunye nezinto zokubhala. Indlela elula kakhulu ukuseta isreyiti yesalathisi yesilinganiselo kwixabiso elenu
umshini unokukwazi ukufezekisa. Ezantsi ubeka isilayidi, ixesha elide leCCU liye laphambukiswa ekunikezeni ukulayisha idatha. Enye into ongayenza ukuguqula
ezilandelayo ziguqule kwiFSX.CFG:
I-FIBER_FRAME_TIME_FRACTION inquma inani elide lixesha nganye kwisakhelo esiza kuqhuba imisebenzi yefiber kwi-thread yokuqala. Silinganisela ukuba kuthatha ixesha elingakanani ukulinganisa nokunikezela nokuphindaphinda elo xesha ngo-FIBER_FRAME_TIME_FRACTION ukuchonga ixesha elide lokuqhuba iifayili. Ngokomzekelo, ukuba kuthatha i-10 milliseconds ukulinganisa nokunikezela kwaye i-FIBER_FRAME_TIME_FRACTION isetyenziswe kwixabiso elingagqibekanga le-0.33, ngoko siza kuvumela iifayili kumtya oyintloko ukuba isebenze ku-10 * 0.33 = 3.3 millisecond. Iimpawu zeqhekeza ze-1.0 kunye ne-2.0, ixesha elinikwe iifayili liya kuba yi-10 millisecond kunye ne-20 millisecond, ngokulandelanayo.
[n = 0.01 - 0.99] Kwi-Quad core okanye iinkqubo ezingcono zama 0.70
Kuthetha ukuba kukho imishini emininzi engundoqo ukuba le nto ingentla ayifuni kwaye yingakho i-0.33 engagqibekanga. Ndandizama nje ngaphandle kwaye ndafumanisa ukuba yandinceda wam. Yonke inkqubo ihluke ngokuhlanganiswa kweekhompyutha kunye neprosoftware. Ngoko ke kufuneka ujikeleze ngeesetingi ezihamba phambili kunkqubo yakho nganye. Zininzi izinto ezisetyenziswayo. Ndiyathanda ukuba ndingathi kukho enye incwadi ifana nesisombululo, kodwa akukho. Ukuba unemiba ye-FPS (iifowuni ngesibini) kwinkqubo yakho ngoku phambi kokuba uqalise ukucima. Ndiyacetyiswa ukuba usombulule loo ngxaki kuqala ngokubeka i-slide kwiindawo apho umatshini wakho usebenza ngokufanelekileyo kwaye ugcine khona. Uvavanye umatshini wakho kwiindawo eziluhlaza kwaye uzame ukugcina i-20 fps. Unako ukumisa okwesikhashana i-fps limiter ukuba ungapheli kwaye ugijime i-FSX ngokusebenzisa ii-paces, uze uyibuyise kwakhona kwi-30fps (ihafu lesantya okanye izilwanyana zakho zihlaziya kwakhona) Ukuba ucinga ngokuba ngummemezeli we-hardcore uze unike ikhomputha nje nge-simulator yendiza. indlela yokuhamba. Uya kusindisa i-$$$ yeqashiso ngokwakha inkqubo yakho.
Kwi b] ITERRAIN [/ b candelo lilandelayo:
Tshintsha kwi-6.500000 ukuya kwi-7.500000
Isimiselo esingentla sichaza umgama uFSX ukhangela indawo (ubukhali) kwaye usebenza nge-TIME_FRAME_TIME_FRACTION.
Ukutshintsha lo mgca kuya kukwandisa ingqalelo ekude kwinqwelo. (Qaphela ukuba kuya kwandisa nokusetyenziswa kwe-VAS yakho ncinane)
Kwinqanaba le- [Terrain]
Qiniseka ukuba oku kusekwe kwi-DETAIL_TEXTURE = 1
Oku kuya kuba yinzuzo ngokukhawuleza kubasebenzisi bezithombe ezibonakalayo. Uza kubona ukubhetele okungcono kunotshani kumgangatho womhlaba kunye nokuphucula okukhulu kwamehlo enkameko ephezulu emoyeni ekhangele phantsi.
Icandelo le-3: Uncedisa ukuthatha umthwalo kwiFSX. Unokukunceda imifanekiso yakho ngakumbi ngokuba nekhadi lakho lemifanekiso ye-HD yenza enye ye-CPU yakho.
Nazi ezinye iividiyo eziwusizo:
Ividiyo elandelayo iphuma kwi-Flight Sim Addict kwaye uyazi izilungiso ezininzi. Ndicinga ukuba naye ilungu leQela le-REX.
Ndiyisebenzisa iMegascenery neBlue Sky kwaye ininzi yayo. Yingakho ine-2 TB HD enikezelwe kwi-FSX. Nangona andidingi ukukhathazeka nge-autogen, indawo yezithombe ingaba ngumngeni kwi-flight level ephantsi xa ifika ekubukhali. Ndasebenzisa le mijelo engentla iphucula ubukhali kwi-500 ft ngoko ukwenza ukutshitshiswa kwam kunye nokuhlaliswa kwamanzi kungenakwenzeka.
Ukuxhamla ngokuyinhloko kwizithombe zengingqi ngaphandle kwe-autogen ukusetyenziswa kwe-VAS kulawulwa ngcono kunye ne-10 fps ukwandisa ukungabhekiseli kwi-truer depression of where you fly. Kuya kuba soloko kubakho abaxhamli abafuna nje ngaphezulu nangaphezulu kodwa kuya ku soloko kubekho isenzo sokulinganisela ukukhusela isicwangciso sokutshatyalaliswa kude kube yikhululwe iqonga le-64 yesikhulumi. Ulawulo olufanelekileyo kunye nokuqonda kakuhle komatshini wakho kuya kuhamba ngendlela ende ukwenza i-FSX ibe yipulatifomu eyonwabileyo kwaye isigxina.
Ndiyathemba ukuba oku kukunceda ekusebenzeni kwaye kwenza i-FSX ngakumbi kwinkqubo yanamhlanje.
Ixesha ukwenza page: 0.400 imizuzwana